Zanakavavy sy reny: sakay sy maso | Karenichia
2 Responses to “Zanakavavy sy reny: sakay sy maso”
Ny tena mamaplahelo koa dia betsaka ny tsy maintsy resahana any amin’ny reny rehefa vehivavy ianao. Ohatra fotsiny hoe ny resaka namana lehilahy ka miditra étape vaovao. Betsaka ny zavatra hainy ny reny nefa tsy vao teny mihitsiny dia lasa mandeha mitonatonana rery ilay ankizy….hmmmm
Toa ohatr’zany doly refa miala sakana ngambany e. Mieritreritra be hoe tsy rarahian’ny ol… te hi-revolte mafy sns… nandalo teo koa ny reninao, koa aza atao personelle be ny ady fa mandalo ihany io. Tia anao foana izy na dia tsy izay loatra aza ny any antsainao sy ao amponao.
Ra te hiresaka enao, fidio fotsiny ny fotoana tokony hiresahana aminy, ny approche-nao… mety foana io fa aza kivy zany 🙂
« Communication For Empowerment
Tsy voatery hoe ny mihoso-potaka ihany no atao hoe skoto »